Football Khabar » रोड्रिगोका लागि मेस्सी र नेइमारमा को उत्कृष्ट ?
रोड्रिगोका लागि मेस्सी र नेइमारमा को उत्कृष्ट ?
ब्राजिलका १८ वर्षीय युवा खेलाडी रोड्रिगो यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय खेलको तयारीमा छन् । उनले अर्जेन्टिनाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलबाट ब्राजिलको टोलीमा डेब्यु गर्दैछन् । रियल मड्रिडमा यसै सिजनबाट सिनियर टोलीमा डेब्यु गरेका उनले सुरुआती खेलबाट शानदार प्रदर्शन गरेपछि ब्राजिलका प्रशिक्षक टिटेले उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा डाकेका हुन् । उनले च्याम्पियन्स लिगमा गोलको खाता खोलेकै खेलमा सनसनीपूर्ण ह्याट्रिक हानेपछि एकाएक चर्चाको चुलीमा छन् । उनले च्याम्पियन्स लिगमा खेलेको दोस्रो खेलमा गोल गर्दै ३ गोल गर्दै १ गोलमा असिस्तसमेत गरेका थिए ।
दुई दिनपछि अर्जेन्टिनाविरुद्धको खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा डेब्यु गर्न लागेका रोड्रिगोलाई हालै एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो देशका सुपरस्टार नेइमार र अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सीमध्ये को उत्कृष्ट खेलाडी भनेर सोधिएको थियो । जसमा उनले मेस्सी छाडेर नेइमार छानेका छन् । ब्राजिलको क्लब सान्तोषका पूर्वखेलाडीसमेत रहेका रोड्रिगोले भने– ‘उनीहरू दुवै विशिष्ट छन् । तर, ब्राजिलको पक्षबाट म नेइमारतर्फ जान्छु । उनी जादुयी शैलीका खेलाडी हुन्, जसबाट म प्रभावित छु । तर, लियोप्रति पनि मेरो विशेष सम्मान छ ।’
रोड्रिगोले रियल मड्रिडका पूर्वखेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग एकै टोलीबाट खेल्ने आफ्ना ठूलो सपना भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको बताए । ‘क्रिस्टियानोसँग सँगै खेल्नु मेरो सपना थियो । तर, अब नहोला,’ उनले भने । रोड्रिगोले अर्जेन्टिनाविरुद्ध आफूले खेल्न पाउने अपेक्षा गर्दै गोल गर्न आफूले प्रयास गर्ने बताए । ‘मलाई आशा छ, प्रशिक्षकले मलाई समय दिनेछन् । समय पाएँ भने गोल गरेर डेब्यु विशेष बनाउने प्रयास गर्नेछु,’ उनले थपे ।
प्रकाशित मिति २७ कार्तिक २०७६, बुधबार २१:१८